Accueil > Gazetin'ny nosy > Naloan’ny fanjakana ny volabe notakiany
Naloan’ny fanjakana ny volabe notakiany
Ela ny ela ka naloan’ny fanjakana ny volabe mahakasika ny tambin-karaman’ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra izay notakian’ny sendika ao amin’ny SECES. Ny tambin-karama mpampianatra mahakasika ny hofa-trano fotsiny no mahatratra 600 000ariary isam-bolana. Mbola misy nefa ny tambin-karama hafa izay mbola azon’izy ireo ambonin’io.
Faly ny mpampianatra mpikaroka mivondrona tao amin’ny SECES omaly zoma faha 26 janoary 2018 omaly raha nanao ny fanambarany teo anatrehan’ny mpanao gazety mba hilaza ny vaovao amin’ny vahoaka Malagasy. Tsy nety nilaza ny tena volabe azony ingahy Randrianasolo Rivoarison izay sekretera jeneralin’ny SECES ity teny amin’ny Piscine Ankatso raha namory ny mpanao gazety. Nisaotra ny minisitra Rasoazananera Marie Monique izy tamin’izany noho ny ezaka nataon’ity minisitra ity hono. Nanomboka tamin’ny taona 2009 no nangataka ity tambin-karama ity ny SECES ireto ka izao nody ventiny izao ny tolona nataon’izy ireo.
Nanambara koa ingahy Randrianasolo Rivoarison izay sekretera jeneralin’ny Seces fa tsy manana fahefana handroaka ny mpikambana telo ao aminy ny SECES eto Antananarivo satria ny fihaonambe ihany no afaka manao izany.
Manameloka tanteraka ny herisetra natao tao amin’ny mpampianatra tany amin’ny oniversite tany Mahajanga koa izy ireo.
Raha ny fahazoana karama be manokana omen’ny fanjakana izay miteraka hantsana amin’ny mpiasam-panjakana rehetra eto Madagasikara dia nomena tombon-dahiny amin’izany ny mpiasan’ny ministeran’ny Vola izay mandray karama mihoa-pampana ankehitriny. Avo teloheny noho ny mpiasam-panjakana tsotra no karaman’izy ireo. Manaraka azy ny mpampianatra ao amin’ny SECES, ary ireo minisitra sy olom-boafidy (depiote sy ny senatera).
Ny mpiasam-panjakana amin’ny ankapobeny indray dia notapahin’ny fanjakana ny karamany tamin’ny volana desambra 2017 teo ary mbola misy andiany vaovao indray izay tamin’ny volana janoary 2018 ity. Ny praiminisitra dia mbola nanamafy fa mbola hotohizina ny fanapahana karama io tamin’ny volana desambra lasa teo, satria izany no pôlitikan’ny fanjakana hono.
Mazava ho azy izao fa tsy mitovy intsony ny satan’ny mpiasam-panjakana Malagasy fa izay mahery mirotaka sy manohitra dia tambatambazana tsy hanohintohina fanjakana ka omena ny vola tadiaviny. Misy ny ambany ary misy ny ambony, misy koa ny atahorana sy tsy atahorana na dia samy diplaoma mitovy lenta izao aza no idirana amin’ny asam-panjakana ireny.
Lainga ny filazana fa tsy manam-bola ny fanjakana fa izay tian’ingahy Hery Rajaonaraimampianina ihany no omeny.